GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chuukese Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kimbundu Kongo Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Mixe Mizo Moore Myanmar Ndebele Norwegian Nzema Ossetian Palauan Papiamento (Curaçao) Polish Ponapean Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tetun Dili Thai Totonac Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese
NDỊ ọkà mmụta okpukpe kweere na amaokwu ahụ dị ezigbo mkpa. Ọ dị mkpa n’ihi na ọrụ ọ na-ekwu maka ya ga-abụ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Ọ dịkwa mkpa n’ihi na o gosiri ọrụ Ndị Kraịst kwesịrị ịna-arụ, bụ́ ọrụ ikwusa ozi ọma a ga-ebu ụzọ rụọ iji maa ọkwa ọbịbịa nke ihe dị egwu ga-emetụta ụwa niile nke Jizọs kpọrọ “ọgwụgwụ.”
Amụma ahụ e buru n’amaokwu ahụ na-emezu taa. O metụtara gị n’ihi na ozi ọma ahụ o kwuru okwu ya ga-akpọ ndị mmadụ òkù ma dọọ ha aka ná ntị. Ọ na-enye gị ohere ịhọrọ otu n’ime ụzọ ihe abụọ: Ịnabata Alaeze Chineke ma ọ bụ imegide ya. Nke ọ bụla ị họọrọ ga-emetụta nnọọ ndụ gị.
Ka anyị tụlee oge e kwuru ihe dị n’amaokwu ahụ. Ụbọchị ole na ole tupu a kpọgbuo Jizọs, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya ma jụọ ya banyere ọdịnihu. Ha chọrọ ịma mgbe a ga-ehiwe Alaeze Chineke, bụ́ nke Jizọs kwuru banyere ya ọtụtụ ugboro. Ha chọkwara ịmara banyere “ọgwụgwụ usoro ihe a,” ma ọ bụ “ọgwụgwụ ụwa,” dị ka ụfọdụ nsụgharị si dee ya.—Matiu 24:3, Baịbụlụ nke International Bible Society.
Mgbe Jizọs na-aza ha ajụjụ ahụ, o buru amụma na a ga-enwe nnukwu agha, ụnwụ nri, ọrịa na-efe efe, na oké ala ọma jijiji. O kwukwara na mmebi iwu ga-amụba, na ndị nkụzi okpukpe ụgha ga-eduhie ọtụtụ ndị, nakwa na a ga-akpọ ezi Ndị Kraịst asị ma kpagbuo ha. Ihe a niile bụ akụkọ ọjọọ.—Matiu 24:4-13; Luk 21:11.
Ma, e nwekwara ozi ọma. Jizọs kwuziri okwu ndị ahụ e dere n’elu, bụ́ okwu kpaliri ọtụtụ ndị ime ihe kemgbe ọtụtụ narị afọ ma mee ka ha chee echiche. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ kwetara na okwu ndị ahụ Jizọs kwuru dị mkpa, ha ekwekọrịtaghị n’ihe ọ pụtara. Olee kpọmkwem ihe bụ́ ozi ọma a? Gịnị bụ Alaeze ahụ? Olee mgbe amụma a ga-emezu, oleekwa ndị ga-emezu ya? Oleekwa ihe bụ́ “ọgwụgwụ” ahụ? Ka anyị hụ.
[Foto dị na peeji nke 2, 3]
Ihe odide Wọshịntịn Nke Oziọma Matiu, Mak, Luk na Jọn e depụtaghachiri edepụtaghachi. E dere Matiu 24:14 ka ọ gbaa okpotokpo
Site n’akwụkwọ bụ́ Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection 1912
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Amụma nke Dị Oké Mkpa